news2dago | Febroary 2009
[Politika ] 05 Febroary, 2009 06:56
Mizotra makany @ ady an-trano
Na inona na inona dia misy hadison'ny vahiny ihany izao zavatra mitranga eto Mandagasikara izao. Misy tena mahatsiaro very tombotsoa manokana indrindra fa ny reny malala hatramin'izay niakaran'i Ra8 teo @ fitondrana izay ary mazava ho azy fa tsy mankasitraka izany izy ireo ka manao izay hatongavana any @ ady an-trano.
Raha tsy mitandrina isika dia ho tody @ zavatra iriny ireto firenena matanjaka ireto satria mantsy afaka miditra mivantana eto ny tafika vahiny hampandry ny tany sy hiaro ny teratany vahiny monina eto amintsika no sady afaka manao ampihimamba maka ny harenan'ny malagasy toy ny vehivavy sy ny vatosoa ary ny safira sy ny lavanila... Misy mivohy foana mantsy izao ny resaka merina sy tanindrana any @ sisiny any ary voalaza fa misy manejika ny mpiavy tany @ faritr'i sava iny ary efa nisy 4 no maty t@ ireo mpanao varo-mandeha.
Ny zavatra mitranga anefa dia ny samy merina no miady seza eto andrenivohitra ny mpanaraka azy ireo anefa dia hita misy fahasamihafana mihitsy satria ny mpanohana ny fitondrana dia olona manana ny toerana salan-tsalany fa ny manohana ny Tgv kosa dia ireo kilasy fahatelo hita izany @ sary maro samihafa ireo izay mora karamaina vola sy tsy mijery lavitra satria efa tena ao anaty fahatrana tanteraka. Mahita izany ireo fanetribem-pirenena izay voakarama ny firenena lehibe ihany koa ka mijapy ilay Tgv sy miantsy ady hatrany handranitana an'i adim-poko io.
Tsy izaho velively no handeha hampianatra ireo ngeza lahy roa mifanandrina eto Iarivo eto fa tokony hahay hanindry fo izy ireo. Ka tsindriko eto mihitsy ny oe tokony hahay hifandefitra satria samy diso samy marina fa tsy misy manana ny marina feno akory afatsy Andriamanitra irery ihany. Zavatra tsy ampoizina akory mantsy dia mety hanimba ny taranaka maro hifandimby. Ny zanak'ireo mpitondra sy mpanakorotana sy mpanao politika ireo moa dia any an-dafy any avokoa. Ka sady tia tena zany ry zareo no tsy mendrika ny hizaka ny zom-pirenena malagasy ihany koa. Asakasak'izay manan-tsaina hitarika adim-poko eto.
Ny vaovao farany eto dago aloha dia ny fifanolanana @ le resaka PDS sy ny fandravana ny sefom-pokotany 192 ka androany no voalaza fa hametraka ny solontena ny PDS ny eo anivon'ny fitondrana hanendry sy hametraka ny eny @ firaisana ary hanedry ny prezidam-pokotany kosa ny ekipan'ny tgv. Mitohy hatrany ny ady saritaka efa manomboka mahatofoka ny vahoaka.